Chit Su - English to Burmese translator. Translation services in Advertising / Public Relations
MBA,7years in Translating Eng-Bur
Local time: 18:08 MMT (GMT+6.5)
English to Burmese: Uglli Ads Employment
ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန် မန်နေဂျာ
English to Burmese: International Federation of Social Workers (IFSW) International Association of Schools of Social Work (IASSW)
Challenging unjust policies and practices – Social workers haveaduty to bring to the attention of their employers, policy makers, politicians and the general public situations where resources are inadequate or where distribution of resources, policies and practices are oppressive, unfair or harmful. Translation - Burmese
နိုင်ငံတကာ လူမှုရေးလုပ်သားများ အဖွဲ့ချုပ် (IFSW) လူမှုရေးလုပ်ငန်းကျောင်းများ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း (IASSW)
မတရားသော မူဝါဒလမ်းစဉ်များ နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရင်ဆိုင်ခြင်း - လူမှုရေးလုပ်သားများသည် ၄င်းတို့၏ အလုပ်ရှင်များ၊ မူဝါဒလမ်းစဉ်ချမှတ်သူများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့် အရင်းအမြစ်များ လုံလောက်မှုမရှိသည့်နေရာ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်များ ဖြန့်ဝေသည့်နေရာတွင် ယေဘုယျ အများပြည်သူ အခြေအနေများ၊ မူဝါဒလမ်းစဉ်များ နှင့် လုပ်ဆောင်မှုများ ဖိနှိပ်ခံရခြင်း၊ မတရားမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်နာကျင်မှုတို့ကို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
English to Burmese: Far East Organization
http://www.fareast.com.sg/en Translation - Burmese
English to Burmese: Corrupt Mankind Is More in Need of the Salvation of God Become Flesh
ဘုရားသခင်သည်လူ့ဇာတိခံယူခဲ့သည့် အကြောင်းမှာ သူ့အမှုတော်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် မာရ်နတ်၏၀ိညာဉ် သို့မဟုတ် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်သောအရာတို့အတွက်မဟုတ်ပဲ မာရ်နတ်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရသော အသွေးအသားနှင့်လူကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူ့အသွေး အသားသည် ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသည့်အတွက် ဘုရားသခင်သည် အသွေးအသားနှင့် လူသားကိုသူ့အမှုတော်၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်စေခဲ့ခြင်းမှာအကြောင်းရင်း အတိအကျဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူသည်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည့်အရာဖြစ်သဖြင့် ဘုရားသခင်သည်လူကို သူ့ ကယ်တင်ခြင်း၏ အဆင့်အားလုံးတောက်လျှောက်တွင် သူ့အမှုတော်၏တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ လူသည် အသွေးနှင့်အသားနှင့် သေမျိုးဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်သည် လူသားကိုကယ်တင်နိုင်သောတစ်ဦးတည်းသောသူဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လူကဲ့သို့တူညီသော ဂုဏ်ဒြပ်များကို ပိုင်ဆိုင်သည့် အသွေးအသားကိုခံယူရန်ဖြစ်လာသည်။ သို့မှသာ သူ၏အမှုတော်တွင် ပို၍ကောင်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုရနိုင်ပေလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမှုတော်ကိုတိကျစွာ ဆောင်ရွက်ရန် လူ့ဇာတိခံရမည်။ အကြောင်းမှာ လူသားသည်အသွေးအသားနှင့်ဖြစ်ကာ အပြစ်ကို အောင်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် အသွေးအသားမှ မိမိကိုယ်ကို ရုပ်သိမ်းရန်မစွမ်း သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိခံသောဘုရားသခင်၏အနှစ်သာရနှင့် ပင်ကိုအရည် အသွေးသည် လူသား၏အနှစ်သာရနှင့်ပင်ကိုအရည်အသွေး နှင့်ကြီးမားသော ကွာခြားမှု ရှိသည်။ သို့ရာတွင်သူ၏အဆင်းသဏ္ဍာန် သည် လူနှင့်ဆင်တူပြီး၊ သာမန်လူတစ်ယောက်၏ အဆင်းသဏ္ဍာန်၊ သာမန်လူတစ်ယောက်၏ဘ၀ကိုနေထိုင်၍သူ့ကိုမြင်သောသူများသည် သာမန်လူတစ်ယောက်နှင့် ကွဲပြားမှုကို သိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤသာမန်အဆင်းသဏ္ဍာန်နှင့် သာမန်လူသားဖြစ်ခြင်းတို့သည် သာမန်လူတို့အကြားတွင် သူ၏ ဘုရားနှင့်သက်ဆိုင်သော အမှုတော်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် လုံလောက်စေပါသည်။ သူ၏အသွေးအသားသည် သူ့အား သာမန်လူသားဘ၀တွင် သူ၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်စေပြီး၊ လူတို့ကြားတွင် သူ၏ အမှုတော်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင် သူ၏သာမန်လူသားဘ၀ သည် လူသားတို့ အကြားကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းအကူအညီပေးသည်။ သူ၏သာမန်လူသားဘ၀သည် လူတို့ကြားတွင် အရှုပ်အထွေးများစွာကိုဖြစ်စေခဲ့သော်လည်း ထို အရှုပ်အထွေးသည် သူ့အမှုတော်၏ ပုံမှန် အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ထိခိုက်ခြင်းမရှိပေ။ အကျဉ်းချုပ်ဆိုရသော် သူ၏သာမန်လူ့အသွေးအသားနှင့်အမှုတော်သည် လူသားအတွက် အကြီးမြတ်ဆုံးသောအကျိုးအမြတ်ကိုပေးသည်။ လူအများစုသည် သူ၏သာမန်ဘ၀ကို လက်သင့်မခံနိုင်သော်လည်း သူ၏အမှုတော်သည် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ သူ၏သာမန်လူသားဘ၀ ကိုခံယူသည့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအတွက် သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိ။ အသွေးအသားခံယူသည့် သူ၏အမှုတော်မှ တဆင့် ဘုရားသခင်၏သာမန်လူသားဘ၀နှင့်ပတ်သတ်၍ လူသားတို့ကြား၌ ရှိနေသော သဘောထားခံယူချက်များထက် လူသားတို့သည် ဆယ်ဆ၊ အဆတရာ ပိုသောအရာတို့ကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအတွေးအခေါ်များအားလုံးသည်လည်း နောက်ဆုံးသ၌ ဘုရားသခင့် အမှုတော်၏ ၀ါးမျြိုခြင်း ကိုခံရပါလိမ့်မည်။ သူ့အမှုတော်မှရရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သတ်၍လူသား၏အသိတရားသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သတ်သော လူသား၏သဘောထားခံယူချက်များထက် သာလွန် များပြားလာမည်။ အသွေး အသားနှင့်သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအမှုတို့ကို စိတ်ကူးရန် သို့မဟုတ် တိုင်းတာရန် နည်းလမ်းမရှိပေ။ အကြောင်းမှာ သူ၏အသွေးအသားသည် လူသား၏အသွေးအသားနှင့် တူညီမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပြင်ဘက်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်သည်ဆင်တူသော်လည်း၊ အနှစ်သာရခြင်း မတူညီပေ။ ဘုရားသခင်၏အသွေးအသားသည် လူတို့ကြားတွင် ဘုရားနှင့် ပတ်သတ်သော ထင်မြင်ယူဆချက်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ သို့ရာတွင် သူ၏အသွေးအသား သည် လူသားကို အသိတရားများစွာရရှိလာစေရန်လည်းခွင့်ပြုနိုင်ပြီး၊ ထိုသို့တူညီသော အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန် ပိုင်ဆိုင်ထားသောလူတို့ကိုပင် သိမ်းပိုက်တော်မူနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် သာမန်လူသားတစ်ယောက်သာမဟုတ်ပဲ၊ လူသား၏အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်နှင့်ဘုရား သခင်ဖြစ်ပြီး၊ မည်သူမျှသူ့ကို အပြည့်အ၀သဘောပေါက်ခြင်း သို့နားလည်နိုင်ခြင်းရှိနိုင် မည်မဟုတ်ပေ။ မျက်စိဖြင့်မမြင်ရ၊ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်လည်းမပြနိုင်သော ဘုရားသခင်ကို အားလုံးက ချစ်ပြီး ကြိုဆိုကြသည်။ အကယ်၍ဘုရားသခင်သည် လူတို့မမြင်နိုင်သော ၀ိညာဉ်တစ်ခုသာဖြစ်ပါက လူသားတို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရန်အလွန် လွယ်ကူ ပါသည်။ လူသားသည် သူ၏တွေးထင်စိတ်ကူးကိုလိုသလိုကြိုးဆွဲနိုင်ပြီး၊ မိမိကိုယ်ကို ကျေနပ်စေရန်နှင့် ပျော်ရွှင်အောင် ပြုရန် ဘုရားသခင်၏ပုံရိပ်ကို သူကြိုက်သည့်ပုံဖော်ကာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် လူသားသည် ကိုယ်ကျင့်တရားစောင့်ထိန်းမှုမရှိပဲ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဘုရားကိုစိတ်အကျေနပ်ဆုံးဖြစ်စေရန် နှင့် ဤဘုရားပြုလုပ်ရန်အလိုတော်အရှိဆုံး မည်သည့်အရာကိုမဆို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် လူသားသည် သူ့ထက်ပို၍ ဘုရားသခင်ကို ပို၍သစ္စာရှိသူ၊ ပို၍ဆပ်ကပ်နိုင်သူ တစ်ဦးမျှမရှိ၊ အခြားသူအားလုံးသည် တပါးအမျိုးသားခွေး များဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်အပေါ် တွင်သစ္စာမရှိသောသူများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်မှု၊ မရေရာသော၊ အယူဝါဒကိုအခြေခံသော ယုံကြည်မှုရှိသူများမှ ရှာဖွေသည့်အရာ ဟုဆိုနိုင်သည်။ သူတို့ရှာဖွေသောအရာသည်အားလုံး အတူတူသာဖြစ်ပြီး ကွာခြားမှု အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ သူတို့၏စိတ်ကူးများထဲမှာ ဘုရားသခင်၏ပုံရိပ်များသည်မတူညီ ကြသော်လည်း လက်တွေ့တွင်သူတို့၏အနှစ်သာရသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
လူသားသည်ဘုရားသခင်အပေါ်ထားသောသူ၏အပူပင်မှုကင်းမဲ့သည့် ယုံကြည်မှုအပေါ် စိတ်ပူပန်မှုမရှိပဲ သူတို့စိတ်ကြိုက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြသည်။ ယင်းသည် မည်သူမျှ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုနိုင်သည့်“လူသား၏အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များ”ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ လူသားသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီး၊ အခြားသူ၏ ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်း မရှိပေ။ ယင်းသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး လူတိုင်း နီးပါးသည် ဤသို့သောပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုရှိကြ၏။ လူတို့သည် ဤပိုင်ဆိုင်မှုကို တန်ဖိုးရှိသော ရတနာတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်အတွက်မူ ထိုထက် ပို၍နိမ့်ကျသော သို့မဟုတ် ပို၍တန်ဖိုးမဲ့သောအရာမရှိတော့ပေ။ အကြောင်းမှာ လူသား၏ဤပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်မှုထက် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းကို ပို၍ရှင်းစွာ ပြသသည့် အရာမရှိ သောကြောင့်တည်း။ အကြောင်းမှာ လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏အမှုတော် ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် လူသားတို့တွေ့မြင်၊ ထိတွေ့နိုင်သည့် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်သော ပုံစံရှိသည့် အသွေးအသားဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ပုံသဏ္ဍာန်မရှိသောဝိညာဉ်မဟုတ်ပဲ လူသားမှ ထိတွေ့ဆက်သွယ်ကာ တွေ့မြင်နိုင်သောအသွေးအသားဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လူအများစုမှယုံကြည်ထားသည့်ဘုရားသခင်သည် သဏ္ဍာန်မဲ့သော အသွေးအသားမရှိသည့် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သူများဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ကြိုက်ပုံလည်းဖြစ်နေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် လူ့ဇာတိ ခံယူသောဘုရားသခင်သည် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူ အများစု၏ရန်သူ ဖြစ်လာပြီး၊ ဘုရားသခင်၏လူ့ဇာတိခံယူခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို လက်မခံနိုင်သည့်သူများ သည်လည်း ထိုနည်းတူပင် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သူများဖြစ်လာပါသည်။ လူသားတို့သည်ထင်မြင် ယူဆချက်များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေသည်မှာ သူတို့၏စဉ်းစားမှုပုံစံ သို့မဟုတ် သူ၏ ပုန်ကန်တတ်မှုကြောင့် မဟုတ်ပဲ လူသား၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှု ကြောင့် လူအများစုသည်သေဆုံးကြပြီး၊ ဤထိတွေ့၍မရ၊ မမြင်တွေ့နိုင်၊ မတည်ရှိသော မရေရာမသေချာသည့်ဤဘုရား ကသာလျှင် အမှန်တကယ်တွင် လူသား၏ဘ၀ကို ဖျက်စီးနေခြင်းဖြစ်သည်။ လူ၏အသက်တာသည် လူ့ဇာတိခံယူသည့်ဘုရားသခင်ကြောင့် ဆုံးရှုံးပျက်စီးရခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကောင်းကင်မှဘုရားသခင်ကြောင့်ပျက်စီးရခြင်းလည်း သာ၍ မဟုတ်ပေ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာလူ၏ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးထဲမှဘုရားကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိ ခံယူသောဘုရားသခင်သည် အသွေးအသားနှင့်ဖြစ်တည်မှု ကိုခံယူရသည့်တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းရင်းမှာ အကျင့်ပျက်စီးနေသောလူသား၏လိုအပ်ချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လူ၏လိုအပ်ချက်များကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏လိုအပ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ပေးဆပ်မှုများနှင့် ဒုက္ခခံယူမှုအားလုံးသည် လူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ကိုယ်ပိုင် ကောင်းကျိုး အတွက်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်အတွက် အကောင်းများ၊ အဆိုးများ သို့မဟုတ် ဆုလဒ်များမရှိပါ။ သူသည် အနာဂတ် ရိတ်သိမ်းမှုအချို့ကို မရိတ်သိမ်း တော့သော်လည်း မူလကတည်းက သူထံတွင် အကြွေးတင်ထားပြီးသည့် အရာတို့ကို ရိတ်သိမ်းတော်မူမည်။ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် သူပြုလုပ်ခဲ့သော၊ ပေးဆပ်ခဲ့သောအရာအားလုံး သည် ဆုလဒ်ကြီးများကိုပြန်လည် ရရှိရန်အတွက်မဟုတ်ပဲ၊ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် သက်သက်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တွင် တွေးထင် မထားနိုင်သောအခက်အခဲများစွာပါဝင်သော်လည်း ယင်းအမှုတော်၏နောက်ဆုံး၌ ရရှိမည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် ၀ိညာဉ်တော်မှတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်သော အမှုတော်များ ထက်သာလွန်များပြားသည်။ အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တွင် အခက်အခဲများ ပါဝင်သည်။ သူသည် ၀ိညာဉ်တော်နည်းတူတန်ခိုးအာဏာကို ပိုင်ဆိုင်ရန်မဆိုထားနှင့် ၀ိညာဉ်တော်ကဲ့သို့ တူညီသောကြီးမြတ်သည့်အဆင့်အတန်းကို မရရှိနိုင်၊ ၀ိညာဉ်တော်ကဲ့သို့ တူညီသော ဆန်းကြယ်သည့်လုပ်ရပ်များကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ပေ။ သို့သော်လည်း ဤထင်ရှားမှု မရှိသောအသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်သောအမှု၏အနှစ်သာရသည် ၀ိညာဉ် တော်ဖြင့်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်သောအမှုထက်သာ၍ကြီးမားလှသည်။ ဤအသွေးအသားဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သည် လူသားတို့လိုအပ်ချက်အားလုံး၏အဖြေဖြစ်လေသည်။ ကယ်တင်ခြင်းခံရမည့်သူများအားလုံးအတွက် ၀ိညာဉ်တော်အသုံးပြုသောတန်ဖိုးသည် အသွေး အသားနှင့်ဘုရားသခင်ထက်သာ၍ သေးငယ်သည်။ ၀ိညာဉ်တော်၏အမှုတော်သည် စကြ၀ဠာ တစ်ခုလုံး၊ တောင်တန်းများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် သမုဒ္ဒရာတို့အပေါ် လွှမ်းခြုံနိုင် သော်လည်း အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်သည် သူနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသော သူတစ်ဦးစီ အတွက် ပို၍ထိရောက်စွာပတ်သက်အကျုံးဝင်လေသည်။ ထို့အပြင် ထိတွေ့နိုင်သော သဏ္ဍာန်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏အသွေးအသားကို လူသားအနေဖြင့် ပို၍နားလည်၊ ယုံကြည်နိုင်ပြီး၊ ဘုရား သခင်နှင့်ပတ်သတ်သောအသိတရားကို ပို၍နက်ရှိုင်းစွာရှာဖွေနိုင်ကာ၊ ဘုရားသခင်၏ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ပို၍လေးနက်သောထင်မြင်ချက်များ ကိုလူသားတို့ ထံတွင် ချန်ထားခဲ့နိုင်ပါသည်။ ၀ိညာဉ်တော်၏အမှုတော်သည်လျှို့ဝှက်မှုဖြင့် ဖုံးကွယ်နေပြီး၊ သေမျိုး ဖြစ်သည့်လူသားတို့အတွက် နားလည်ရန်ခက်ခဲလှကာ၊ တွေ့မြင်နိုင်ရန်ပို၍ပင်ခက်သဖြင့် သူတို့သည် အနှစ်သာရမဲ့သောထင်မြင်ချက်များအပေါ် တွင်သာမှီခိုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်သည် သာမန်ဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တရား အပေါ်တွင် အခြေခံကာ ကြွယ်ဝသောအသိဥာဏ်တို့ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ လူသား၏ ခန္ဓာမျက်လုံးဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ လူသည် ဘုရားသခင့်အမှု၏ ဥာဏ်ပညာကို ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ကာများပြားသော သူ၏အတွေးအခေါ်များကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးရန်မလိုအပ်တော့ပေ။ ဤသည်မှာ အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်၏ တိကျ၍စစ်မှန်သော တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ၀ိညာဉ်တော်သည် လူတို့မမြင်နိုင်သောအရာများကိုသာလုပ်နိုင်ပြီး လူတို့ တွေးထင်ရန် ခက်ခဲသောအရာများ၊ ဥပမာ- ၀ိညာဉ်တော်၏ဥာဏ်အလင်း ပေးခြင်း၊ ၀ိညာဉ်တော်လှုပ်ရား ထိတွေ့ခြင်း၊ နှင့် ၀ိညာဉ်တော်၏လမ်းညွှန်ခြင်း- တို့ကိုသာပြုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားတို့အတွက် ဤအရာ တို့သည် ရှင်းလင်းသောအဓိပ္ပါယ်ကို မပေးအပ်နိုင်ချေ။ ယင်းတို့သည် ရွေ့လျားသော သို့မဟုတ် ကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပါယ်ကို သာပေးအပ်ပြီး စကားလုံးများဖြင့် ညွန်ကြားချက်တစ်ခုကိုမပေးအပ်နိုင်ပေ။ အသွေးအသားနှင့် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်မှာမူ အလွန်ပင်ကွာခြားပါသည်။ ယင်းသည် တိကျသော လမ်းညွှန် သည့်စကားလုံးများရှိပြီး၊ ရှင်းလင်းသောအလိုတော်နှင့် ရှင်းလင်းသော လိုအပ်သည့် ပန်းတိုင်တို့ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လူတို့သည် မှန်းဆချက်များကိုပြုလုပ်ရန်မဆိုနှင့် စမ်းတ၀ါးဝါး ပင်သွားလာနေစရာ သို့မဟုတ် သူတို့အတွေးအထင်များကို အသုံးပြုရန်စရာမလိုတော့ပေ။ ဤသည်မှာ အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်နှင့် ၀ိညာဉ်တော်၏ အမှုတော်နှင့် ကြီးမားစွာကွာခြားမှု တို့အပေါ်ရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ၀ိညာဉ်တော်၏အမှုတော်သည် ကန့်သတ်ထားသောနယ်ပယ်တစ်ခုအတွက်သာသင့်လျော်ပြီး၊ အသွေးအသားနှင့် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကိုအစားမထိုးနိုင်ပေ။ အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်သည် ၀ိညာဉ်တော်၏အမှုတော်ထက် လူသားကို ပို၍တိကျပြီး လိုအပ်သော ပန်းတိုင်များ၊ ပို၍စစ်မှန်တန်ဖိုးရှိသောအသိတရာများ ပေးအပ်သည်။ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်စီးသောလူသားအတွက် အကြီးမားဆုံးသော တန်ဖိုးရှိသည့်အမှုတော်မှာ တိကျသောနှုတ်ထွက်စကားများ၊ ရှာဖွေရန် ရှင်းလင်းသောပန်းတိုင်များကိုပေးခြင်း နှင့် မြင်တွေ့နိုင်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောအမှုတော်၏ အချိန်နှင့် တပြေးညီသောလမ်းညွှန်မှုတို့သည်သာလျှင် လူသား၏ သိမြင်နားလည်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်ပြီး၊ အမှုတော်အစစ်အမှန်သာလျှင် လူသားကို သူ၏ ယိုယွင်း၍ စာရိတ္တပျက်ပြားသော စရိုက်သဘောထားမှကယ်တင်နိုင်သည်။ ဤအရာကို လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်ထံမှ သာလျှင်ရရှိနိုင်သည်။ လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားသခင်သာလျှင် လူသား၏ယခင်ကယိုယွင်း၍ စာရိတ္တပျက်ပြားသောစရိုက်သဘောထားမှ လူသားကို ကယ်တင်နိုင်သည်။ ၀ိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ရှိရင်းစွဲအနှစ်သာရဖြစ်သော်လည်း ဤသို့သောအမှုတော်ကို သူ၏ အသွေးအသားဖြင့်သာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၀ိညာဉ်တော်သည် တစ်ဦးတည်းသာ အလုပ်လုပ်မည်ဆိုပါက သူ၏အမှုတော်သည် အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ယင်းမှာ သိသာသောအမှန်တရားဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် ဤအသွေးအသားကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများဖြစ်လာသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမှုတော်ကို အဆုံးသတ်ချိန်တွင် သူ့ကိုဆန့်ကျင်သောသူများသည် သူ၏ရန်သူဖြစ်ခြင်းမှ ဆုတ်ခွာကာ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် သူ၏သက်သေခံများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်မှအောင်နိုင်ခဲ့သော သက်သေများ၊ သူနှင့်သဟဇာတရှိသော၊ သူနှင့်ခွဲ၍မရသော သက်သေများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားကို အသွေးအသားဖြင့် လုပ်ဆောင်သောသူ့အမှုတော်၏ အရေးကြီးမှုကိုသိရှိစေပြီး၊ လူသားသည်လည်း သူ၏ဖြစ်တည်မှုအဓိပ္ပါယ်အတွင်းမှ ထိုအသွေး အသားနှင့်ဘုရား၏ အရေးပါပုံကို နားလည်လာကာ၊ လူ့အသက်တာကြီးထွားမှုတွင် ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောတန်ဖိုးကိုသိလာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ဤအသွေးအသားနှင့်ဘုရား သည် လူသားတို့ ခွဲခွာရန်မစွမ်းသာသော ဘ၀၏ သက်စမ်းရေ ဟုသိလာမည်။ လူ့ဇာတိခံယူသော အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်သည် ဘုရားသခင်၏ ပင်ကိုစရိုက်၊ အနေအထားနှင့်တူညီရန်ဝေးကွာလှကာ လူသားအတွက် ဘုရား၏အမှန်တကယ် အခြေအနေနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပုံမပေါ်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏အမှန်တကယ်ပုံရိပ် သို့မဟုတ် အမှန်တကယ် ပင်ကိုစရိုက် ကိုမပိုင်ဆိုင်ထားသော ဤအသွေးအသားနှင့် ဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မှတိုက်ရိုက်မလုပ်ဆောင်နိုင် သောအမှုတော်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏လူ့ဇာတိခံယူမှု၏ စစ်မှန်သောထင်ရှားမှုနှင့် တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး၊ ဤထင်ရှားမှုနှင့် တန်ဖိုးကို လူသားသည် အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏၀ိညာဉ်တော်ကိုမျှော်ကြည့်ကြပြီး၊ ဘုရားသခင်၏အသွေးအသားခံယူမှုကို အထင်သေးကြသော်လည်း၊ သူတို့မည်သို့ပင် ကြည့်ရှု တွေးထင်စေကာမူ အသွေးအသားခံယူမှု၏စစ်မှန်သော ထင်ရှားမှုနှင့် တန်ဖိုးသည် ၀ိညာဉ် တော်၏ထင်ရှားမှုနှင့် တန်ဖိုးထက်များစွာသာလွန်ပါသည်။ ဤအရာသည် ပျက်စီးနေသော လူသားမျိုးနွယ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားကိုရှာဖွေကာ ဘုရားသခင် ၏ကိုယ်ထင်ပြမှုကို စောင့်မျှော်နေသောသူအားလုံးအတွက် ၀ိညာဉ်တော်၏အမှုတော်သည် စိတ်ထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် ဗျာဒိတ်ပေးခြင်း နှင့် ရှင်းမပြနိုင်သော၊ တွေးထင်မထားနိုင်သော အံ့သြဖွယ်ခံစားချက်နှင့် ကြီးမြတ်သော၊ မြင့်မြတ်သော၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော ခံစားချက်တို့ ကို ပေးအပ်နိုင်သော်လည်း ယင်းသည်အားလုံးအတွက်ရယူရန်မဖြစ်နိုင်၊ မရရှိနိုင်သောအရာ လည်းဖြစ်သည်။ လူသားနှင့် ဘုရားသခင်၏၀ိညာဉ်တော်သည် သူတို့ကြားတွင် ကြီးမားသော အကွာအဝေးတစ်ခု ရှိသကဲ့သို့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အဝေးမှသာ ကြည့်နိုင်ကြပြီး၊ မမြင်ရသော အပိုင်းအခြားတစ်ခုက ခွဲခြားထားသည့်နှယ် သူတို့သည် မည်သည့်အခါမှတူညီနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အမှန်တွင်မူ ယင်းသည် ၀ိညာဉ်တော်မှလူသားကိုပေးသော အထင်မှားစေသည့်အရာ တစ်ခုဖြစ် သည်။ အကြောင်းမှာ ၀ိညာဉ်တော်နှင့် လူသားသည် တစ်မျိုးတည်းတစ်စားတည်းမဟုတ်ပေ။ ၀ိညာဉ်တော်နှင့် လူသားသည် တူညီသော လောကကြီးထဲတွင် အတူတကွ မည်သည့် အခါမှနေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်သလို ၀ိညာဉ်တော်သည် လူသားကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိ သောကြောင့်တည်း။ ထို့ကြောင့် လူသားထံတွင် ၀ိညာဉ်တော်လိုအပ်ချက် မရှိပေ။ အကြောင်းမှာ ၀ိညာဉ်တော်သည် လူသားတို့မှအလိုအပ်ဆုံးသော အမှုတော်ကို တိုက်ရိုက်မဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အသွေးအသားနှင့်ဘုရား၏အမှုတော်သည် လူသားတို့အား စစ်မှန်သော ရည်ရွယ်ချက်များကို လိုက်လံရှာဖွေရန်၊ ရှင်းလင်းသော စကားလုံးများနှင့် ဘုရားသခင်သည်စစ်မှန်ကာပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူသည် နှိမ့်ချပြီး သာမန်ဖြစ်သည်ဟူသောခံစားမှုတို့ကိုပေးတော်မူသည်။ လူသားသည်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ သော်လည်း လူအများစုအတွက် သူသည် နားလည်ဆက်စပ်နိုင်ရန်လွယ်ကူသည်။ - လူသားသည် ဘုရားသခင်၏မျက်နှာကိုမြင်တွေ့နိုင်၊ သူ၏အသံကိုကြားနိုင်ပြီး သူ့ကို အဝေးမှကြည့်ရန် မလိုအပ်ပေ။ ဤအသွေးအသားနှင့်ဘုရားကိုလူသားတို့မှချဉ်းကပ်နိုင်ပြီး၊ ဝေးကွာလွန်းခြင်း၊ နားမလည်နိုင်လွန်းခြင်းမရှိပဲ၊ ဤအသွေးအသားနှင့်ဘုရားသည် လူသားတို့ နေထိုင်သော တူညီသောကမ္ဘာလောကကြီးတွင်ရှိနေသဖြင့် မြင်နိုင်ထိတွေ့နိုင်ပေသည်။
အသွေးအသားနှင့်နေထိုင်ပြီး သူတို့၏အကျင့်စရိုက်များကို ပြောင်းလဲလိုသောသူများ အတွက် လိုက်လျှောက်ရန်ပန်းတိုင်များလိုအပ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ကိုသိခြင်းသည် ဘုရားသခင် ၏စစ်မှန်သောလုပ်ရပ်များနှင့် စစ်မှန်သောမျက်နှာတော်ကိုသက်သေခံနိုင်ခြင်းကို လိုအပ်ပါ သည်။ ဤနှစ်ခုစလုံးကို ဘုရားသခင်၏လူ့ဇာတိခံယူသော အသွေးအသားဖြစ်တည်မှုမှသာ ရယူနိုင်ပြီး၊ နှစ်ခုစလုံးကို သာမန်ဖြစ်သော စစ်မှန်သော အသွေးအသားဖြင့်သာ ရယူနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းကိုလိုအပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့် အကျင့်ပျက်သောလူသား မျိုးနွယ်မှယင်းကိုလိုအပ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ လူသားတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိရန်လိုအပ်သဖြင့်၊ေ၀၀ါးပြီး မြင့်မြတ်သော ဘုရားများ၏ ပုံရိပ်များကို သူတို့၏နှလုံးသားများမှ လွင့်ပျောက်သွားအောင်ပြုသင့်သည်။ သူတို့၏ပျက်စီးသောအကျင့်စရိုက်များကို ပယ်ထုတ်ပစ် ရန်လိုအပ်သဖြင့် သူတို့သည် ပထမဆုံးအနေဖြင့် သူတို့၏ပျက်စီးသောအကျင့်စရိုက်များကို သိသင့်ပါသည်။ လူသားသည် သူတို့၏နှလုံးသားများထဲမှေ၀၀ါးသောဘုရားများ၏ပုံရိပ်များကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်အတွက် သူတို့ဖာသာလုပ်ဆောင်ပါက သင့်လျော်သော အကျိုးသက်ရောက်မှု ကိုရရှိနိုင်မှုရှိမည်မဟုတ်ပေ။ လူသားတို့၏နှလုံးသားများမှေ၀၀ါးသောဘုရားများ၏ပုံရိပ်များကို စကားလုံးများဖြင့်သာ မြင်သာအောင်ပြခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အ၀ နှင်ထုတ်ခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ ထိုသို့ပြုလျှင် လူတို့ထံတွင် နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်စွဲနေသောဤအရာများကို ပပျောက်စေရန်မှာ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤအရာတို့ကို လူတို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းသိလာခွင့်ပေးရန် လက်တွေ့ကျသောဘုရားသခင် နှင့် ဘုရားသခင် ၏ပုံရိပ်စစ်တို့သာလျှင် ဤမသေချာသော၊ သဘာဝလွန်သောအရာများ ကိုအစားထိုးနိုင်ကာ၊ ဤနည်းအားဖြင့်သာ သတ်မှတ်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ လူတို့သည် ယခင်အတိတ်ကသူတို့ရှာဖွေခဲ့သောဘုရားသခင်သည် ရေရာမှုမရှိပဲ သဘာဝထက် သာလွန် နေသည်ကို သတိပြုမိမည်။ ဤအကျိုးဆက်ကိုရယူနိုင်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးဦး၏ သင်ကြားမှုကို မဆိုထားနှင့် ၀ိညာဉ်တော်၏တိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မှုကြောင့်ပင် မဟုတ်ပဲ၊ လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ လူတို့၏တွေးထင်ယူဆချက်များသည် လူ့ဇာတိခံယူ သည့်ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမှုတော်ကို တရားဝင်ဆောင်ရွက်ချိန်၌ ထင်ရှားစွာပေါ်လာမည်။ အကြောင်းမှာလူ့ဇာတိခံယူသည့် ဘုရားသခင်၏သာမန်ဖြစ်ခြင်း နှင့်စစ်မှန်ခြင်းသည် လူတို့စိတ်ကူးထဲမှာ မသေချာမရေရာသော သဘာဝလွန်သည့် ဘုရားနှင့်ပကတိ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်တည်း။ လူသားတို့၏မူလအတွေးအခေါ်များကို သူတို့၏ လူ့ဇာတိခံယူသည့်ဘုရားအပေါ်ထားသည့်ကွာခြားမှုတို့ဖြင့်သာ ပေါ်လွင်စေနိုင်ပါသည်။ လူ့ဇာတိခံယူသည့်ဘုရားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိပဲ လူသားတို့၏အတွေးအထင်များကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ တစ်နည်းဆိုရသော် အမှန်တရားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြခြင်းမရှိပဲ မရေရာသော အရာများကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဤအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် မည်သူမျှ စကားလုံးသုံး၍ဤအမှုကိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။ မည်သူမျှဤအမှုကို စကားလုံးသုံး၍သာ ပြောနိုင်စွမ်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သာလျှင် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အမှုတော်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သူ့ကိုယ်စားမည်သူကမျှလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ လူတစ်ဦးသည် မည်မျှပင်ဘာသာစကားကြွယ်ဝနေစေကာမူ သူသည် ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်မှုနှင့် သာမန်ဖြစ်မှု အကြောင်းကို ပြောပြနိုင်စွမ်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် လူသားတို့အလယ်တွင် ကိုယ်တိုင် အမှုတော်လုပ်ဆောင်ကာ သူ၏ပုံရိပ်နှင့် သူ၏ဖြစ်တည်မှုကို အပြည့်အ၀ပြသမှသာလျှင် လူသားသည် ဘုရားသခင်ကို ပို၍လက်တွေ့ကျကျသိကာ ပို၍ရှင်းလင်းစွာ တွေ့နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဤရလဒ်ကို မည်သည့်အသွေးအသားနှင့်လူကမျှ မရယူနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော် သည်လည်း ဤရလဒ်ကိုရယူနိုင်စွမ်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် လူသားကို မာရ်နတ်လွှမ်းမိုးမှုမှ ကယ်ဆယ်နိုင်သော်လည်း ဤအမှုတော်ကိုမူဘုရားသခင်၏၀ိညာဉ်တော် မှတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ထို့အစား ဤအမှုကို ဘုရားသခင်၏၀ိညာဉ်တော်မှ ယူတင်ဝတ်ဆင်ထားသည့် လူ့အသွေးအသားနှင့်ဘုရားသခင်၊ လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်မှ သာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဤအသွေးအသားသည်လူဖြစ်သည်။ ဘုရားလည်း ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်လူသားဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသောလူသားတစ်ယောက် နှင့် မြင့်မြတ်စုံလင်မှုအလုံးစုံ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသောဘုရားသခင်လည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤအသွေးအသားသည် ဘုရားသခင်၏၀ိညာဉ်တော်မဟုတ်သော်လည်း ၀ိညာဉ်တော်နှင့်အလွန်ကွာခြားလှသည်။ ယင်းသည် ၀ိညာဉ်တော်လည်းဖြစ်ပြီး အသွေးအသားနှင့်လည်းဖြစ်သော လူသားတို့ကို ကယ်တင်သည့် ကိုယ်တိုင်လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ သူ့ကို မည်သို့ခေါ်သည်ဖြစ်စေ သူသည် နောက်ဆုံးတွင် လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်မည့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်၏၀ိညာဉ်တော်သည် အသွေးအသားနှင့်ခွဲခြား၍မရပဲ အသွေးအသားနှင့်ဘုရား၏အမှုတော်သည်လည်း ၀ိညာဉ်တော် ဘုရား၏အမှုတော်ပင်ဖြစ်လေသည်။ ဤအမှုတော်ကို ၀ိညာဉ်တော်ပုံစံအသုံးပြု၍ မလုပ်ဆောင်ပဲ အသွေးအသားအကျင့်စရိုက်ကို အသုံးပြု၍လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၀ိညာဉ်တော်မှတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အလုပ်များသည် ဇာတိပကတိခံယူခြင်း ကိုမလိုအပ်ပေ။ အသွေးအသားလူ့ဇာတိခံယူရန်လိုအပ်သည့်အမှုကိုလည်း ၀ိညာဉ်တော်မှ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ၊ လူ့ဇာတိခံယူသည့်ဘုရားသခင်မှသာလျှင် လုပ်ဆောင်နိုင် ပါသည်။ ယင်းသည် ဤအမှုတော်အတွက် လိုအပ်သည့်အရာ၊ အကျင့်ပျက်ပြားနေသော လူသားမျိုးနွယ်မှ လိုအပ်သည့်အရာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်အမှုတော်၏အဆင့်သုံးဆင့် အတွင်းတွင် အဆင့်တစ်ဆင့်သာလျှင် ၀ိညာဉ်တော်မှ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ပြီး ကျန်အဆင့် နှစ်ဆင့်ကိုမူ လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားသခင် မှ လုပ်ဆောင်ကာ ၀ိညာဉ်တော်မှ တိုက်ရိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိပေ။ ၀ိညာဉ်တော်မှလုပ်ဆောင်သော ဥပဒေနှင့်ဆိုင်သောအမှုတို့တွင် လူသား၏ ပျက်စီးယိုယွင်းသောပင်ကိုစရိုက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမပါဝင်ပေ။ လူသား၏ဘုရား သခင်နှင့်ပတ်သတ်သောအသိတရားနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ဆက်စပ်ပေးခြင်းမရှိပေ။ သို့ရာတွင် ကျေးဇူးတော်ခေတ်နှင့် နိုင်ငံတော်ခေတ်ထဲမှ ဘုရားသခင်အသွေးအသားနှင့် ဖြစ်တည်ကာ လုပ်ဆောင်သောအမှုတွင် လူသား၏ပျက်စီးနေသောအကျင့်စရိုက်နှင့် ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သတ်သောသူ၏အသိတရားတို့ပါဝင်ကာ၊ ကယ်တင်ခြင်းအမှု၏အရေးကြီး၍အချက်ချာ ကျသောအပိုင်းဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့်အကျင့်ပျက်ပြားနေသောလူသားမျိုးနွယ်သည် လူ့ဇာတိခံယူသည့်ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကိုပို၍လိုအပ်ပြီး၊ လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုကို ပို၍လိုအပ်ပါသည်။ လူသားမျိုးနွယ်သည် လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရား၏ လမ်းပြမှု၊ ပံ့ပိုးမှု၊ ရေတိုက်မှု၊ ကျွေးမွေးမှု၊ စီရင်မှုနှင့် ဆုံးမမှု ကိုလိုအပ်ပါသည်။ လူသားသည် လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားသခင်ထံမှ ပို၍များသော ကောင်းချီးနှင့် ကြီးမားသော ရွေးနှုတ်ခြင်းတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်။ အသွေးအသားနှင့် ဘုရားသခင်သာလျှင်လူသား၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသူ၊ လူသား၏သိုးထိန်း၊ လူသားအတွက် အမြဲဖြစ်တည်နေသော အကူအညီဖြစ်ပြီး၊ ဤအရာအားလုံးသည် ယနေ့နှင့် ယခင်အတိတ်ကာလမှ လူ့ဇာတိခံယူရန်လိုအပ်ခြင်းအကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။
လူသားသည် မာရ်နတ်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းမှုများအားလုံးထဲ၌ အမြင့်ဆုံးအရာဖြစ်သဖြင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကိုလိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင် ကယ်တင်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းသည် လူသားဖြစ်ပြီး မာရ်နတ်မဟုတ်ပေ။ ကယ်တင်ခြင်းခံရမည့်အရာမှာ လူသား၏ အသွေးအသားနှင့် လူသား၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီး နတ်ဆိုးမဟုတ်ပေ။ မာရ်နတ်သည် ဘုရားသခင်သုတ်သင်မည့်အရာဖြစ်ပြီး၊ လူသားသည် ဘုရားသခင်ကယ်တင်မည့် အရာဖြစ်သည်။ လူသား၏အသွေးအသားကိုစာတန်ကဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ပထမဆုံး ကယ်တင်ရမည့်အရာမှာ လူသား၏အသွေးအသားပင်ဖြစ်သည်။ လူ့အသွေးအသားသည် အများဆုံးအကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ ယင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည့် အရာဖြစ်လာကာ၊ ဘုရားသခင်၏တည်ရှိမှုကို ပို၍ပင် ပွင့်လင်းစွာ ဆန့်ကျင်၍ ငြင်းဆန်သည်။ ဤပျက်စီးနေသောအသွေးအသားသည် ပြောင်းလဲရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲလှပြီး အသွေးအသား ၏ပျက်စီးနေသောအကျင့်စရိုက်ကို ကိုင်တွယ်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန် လောက်ခက်ခဲ သည့်အရာမရှိပေ။ မာရ်နတ်သည် လူ့အသွေးအသားထဲသို့ နှောင့်ယှက်မှုများ ဖြင့်မွှေနှောက် ရန်ဝင်ရောက်လာပြီး၊ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုနှောင့်ယှက်ရန် လူ့အသွေးအသားကို အသုံးပြုကာ ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ကို ယိုယွင်းစေခဲ့သဖြင့် လူသားသည် ဘုရားသခင် ၏ရန်သူ၊ မာရ်နတ်ဖြစ်သွားသည်။ လူသားသည်ကယ်တင်ခြင်းရရန်အတွက် သူသည် ပထမဆုံးအနေဖြင့် သိမ်းပိုက်အောင်နိုင်ခြင်းခံရမည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင် သည် စိန်ခေါ်မှုအတွက် ထကာ၊ သူပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သောအမှုတော်ကိုပြုရန် အသွေး အသားတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီး မာရ်နတ်ကို တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ရည်မှန်းချက်မှာ သူ့ကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သော စာတန်ကြောင့် အကျင့်ပျက်စီးကာ ကျရှုံး၊ ပျက်သုဉ်းခဲ့ရသော လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားကို အောင်နိုင် သိမ်းပိုက်သည့် သူ၏အမှုတော်အားဖြင့် မာရ်နတ်ကိုအနိုင်ယူကာ တစ်ဆက်တည်းတွင် ပျက်စီးနေသော လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် ပြဿနာနှစ်ခုကိုဖြေရှင်းသည်။ လူသားနှင့် ပို၍ကောင်းစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်နှင့် လူသားကိုပို၍အောင်မြင်စွာ သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် သူသည် အသွေးအသားနှင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ အသွေးအသားနှင့် စကားပြောသည်၊ အသွေးအသား နှင့် အမှုတော်အားလုံးကို ပြုလုပ်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင် နောက်ဆုံးအကြိမ် အသွေးအသား ဖြစ်လာချိန် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များ၌သူ၏အမှုတော်ကို အသွေးအသားနှင့် နိဂုံးချုပ်ခြင်း ပေလိမ့်မည်။ သူသည် လူသားအားလုံးကို အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားပြီး၊ သူ၏အလုံးစုံသော စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအဆုံးသတ်ကာ သူ၏အသွေးအသားနှင့်အမှုတော်အားလုံးကိုလည်း နိဂုံးချုပ်လိမ့် မည်။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှ သူ၏အမှုတော်သည်အဆုံးသို့ရောက်ချိန်တွင် သူသည် အပြည့်အ၀ အောင်နိုင်မှုရလိမ့်မည်။ အသွေးအသားနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည်လူသား မျိုးနွယ်ကို အပြည့်အ၀ အောင်နိုင်ပြီး၊ အပြည့်အ၀သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်လိမ့်မည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏အလုံးစုံသော စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အဆုံးသို့ရောက်မည်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါလား။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏ အမှုတော်ကို အသွေးအသားပုံစံဖြင့်အဆုံးသတ်ချိန်တွင် မာရ်နတ်ကို သူသည် အပြည့်အ၀အနိုင်ယူကာ အောင်နိုင်သဖြင့် မာရ်နတ်သည် လူသားတို့ကို ဖျက်ဆီးရန် နောက်ထပ်အခွင့်အရေးရနိုင် တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ပထမလူ့ဇာတိခံယူသည့် အမှုတော်သည်လူသားကို အပြစ်မှရွေးနှုတ်ရန်နှင့် ခွင့်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ယခု လူသားမျိုးနွယ်ကို အနိုင်ယူကာ အပြည့်အ၀သိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အမှုတော်ဖြစ်လာသည်။ သို့မှသာ မာရ်နတ်သည် သူ၏အလုပ်ကိုထပ်လုပ်ရန်လမ်းမရှိတော့ပဲ လုံးဝလမ်းပျောက်ကာ ဘုရားသခင်သည် အပြည့်အ၀အနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အသွေးအသားနှင့် ဘုရား၏အမှုဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တ
English to Burmese: Patient Consent Form
Every Health Professional, including General Practitioners, Medical Specialists and Allied Health Professionals, is legally and ethically obliged to treat your health information as confidential. However, Health Professionals may need to share this information with other Health Professionals to ensure you receive the best treatment.
The I-MED Group, including I-MED Network Limited and its associated entities (collectively I-MED), employs state of the art technology that can securely transfer your diagnostic test images and reports. This technology allows your images and reports to be accessed electronically via our Referrer Portal by Health Professionals who inform us are involved in your care and ensures much faster and environmentally safe delivery of test results than traditional printed film technology.
ACCESS TO YOUR PATIENT MEDICAL IMAGING RECORDS
In accordance with our Privacy Statement (Your Privacy)* and in alignment with standard practice, we will make your tests and reports available electronically to:
(a)	the Health Professional who referred you to us for testing, and nominees of your referring Health Professional (for example employees and other Health Professionals in your referring Health Professional's clinic); and
(b)	any ‘cc’d Health Professional’; and
(c)	any Health Professional who informs us is involved in your care and who has asked us to make your tests and reports available.
* For more information about your privacy, please refer to our Privacy Statement (Your Privacy) on our website at
By signing this Consent Form, you agree to us making your tests and reports available electronically via our Referrer Portal to any Medical Specialists or hospital medical staff who have signedaUser Access Agreement with I-MED. The User Access Agreement includesarequirement for portal users to comply with codes of practice, privacy laws, the responsible handling of health records and information and the legal and ethical obligations of professional confidentiality relevant to their profession. Health Professionals and staff also agree to access medical imaging records for the sole purpose of providing diagnostic or treatment services to the patient concerned.
Note: In an emergency situation, we may permit Health Professionals to access your health records in accordance with the privacy laws including where it is necessary to prevent or lessenaserious threat to life, health or safety, or you are physically or legally incapable of giving consent to the access, or you physically cannot communicate your consent to the access. Any Health Professional who accesses your health records in these circumstances will also remain subject to the codes of practice, privacy laws, the responsible handling of health records and information and the legal and ethical obligations of professional confidentiality relevant to their profession.
Note: A parent, guardian, carer or other authorised representative is required to sign this consent form where the patient is incapable of understanding this form or of makingadecision in relation to giving consent. A patient may be incapable by reason, for example, of age, injury, illness or mental or physical impairment. A patient who is under the age of 18 years is not automatically considered incapable only because of their age as they may be mature enough to make informed privacy choices on their own behalf.
By signing this form, I agree that I-MED can make my diagnostic test images and reports available electronically via the Referrer Portal to any Medical Specialists or hospital medical staff who have signedaUser Access Agreement with I-MED, as outlined above.**
Patient’s Full Name (PLEASE PRINT) ………………………………………………………………………………..
Patient’s Signature ............................……………………………….…………………………………………………
Parent/Guardian/Carer/Authorised Representative Full Name (PLEASE PRINT) & Signature
** You can withdraw your consent at any time by sending us notice in writing either to your local clinic or to our registered address.
လူနာ သဘောတူညီမှု ပုံစံ
အထွေထွေ ရှေ့နေလုပ်ကိုင်သူများ၊ ဆေးကုသရေး အထူးကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်နွယ်သည့်ကျွမ်းကျင်သူများအပါအ၀င် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးသည် သင်၏ ကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက်များကို လှို့ဝှက်ချက်အနေဖြင့် ပြုမူလုပ်ဆောင်ရန် ဥပဒေအရ နှင့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ တာဝန်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများသည် သင့်အား အကောင်းဆုံးကုသမှုများရရှိမှုကို သေချာစေရန်အတွက် ထိုအချက်အလက်များကို အခြားသော ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် ဝေငှရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။
I-MED ကွန်ရက်လီမိတက် နှင့် ၄င်းနှင့်ဆက်စပ်သော အခွင့်ရှိသူများ (I-MED အစုအပေါင်း)အပါအ၀င် I-MED အဖွဲ့သည် သင့်ရောဂါအဖြေရှာခြင်း ဆေးစစ်မှု ထင်မြင်ချက်များ နှင့် အစီရင်ခံစာများကို လုံခြုံစွာ လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် အတတ်နည်းပညာ အခြေအနေကို အသုံးပြုသည်။ ထိုနည်းပညာသည် သင့် ထင်မြင်ချက်များ နှင့် အစီရင်ခံစာများအား ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးထားသည့် သင့်စောင့်ရှောက်မှုတွင် ပါဝင်သော ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ညွှန်းကိုးကားမှု လမ်းညွှန်မှတဆင့် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာအရ ရရှိရန် ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင် ဆေးစစ်ချက်အဖြေများကို အစဉ်အလာအရ ပုံနှိပ်ထုတ်ထားသော ဖလင်နည်းပညာထက် ပိုလျင်မြန်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအရ လုံခြုံသောပို့ဆောင်ပေးမှုက်ို သေချာစေသည်။
သင်၏ လူနာဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ ထင်မြင်ချက် မှတ်တမ်းများကို ရယူခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖော်ပြချက် (သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်)*အရ နှင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးသော စံနှုန်းများအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဆေးစစ်ချက်များ နှင့် အစီရင်ခံစာများကို အောက်ဖော်ပြပါများထံသို့ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာအရ ရရှိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်မည်။
(က) သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ဆေးစစ်ရန်လွှဲပြောင်းပေးသည့် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများ၊ နှင့် သင့်အားလွှဲပြောင်းပေးသည့် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူမှ အဆိုပြုထားသူများ (ဥပမာအားဖြင့် သင့်အားလွှဲပြောင်းပေးသည့် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူ၏ ဆေးခန်းမှ အလုပ်သမားများ နှင့် အခြား ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများ)-နှင့်
(ခ) မိတ္တူပို့ပေးထားသော မည်သည့်ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူကိုမဆို- နှင့်
(ဂ)	ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးထားသည့် သင့်စောင့်ရှောက်မှုတွင် ပါဝင်သော ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် သင့်ဆေးစစ်ချက်များ နှင့် အစီရင်ခံစာများကို ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောဆိုထားသည့်သူများ
*သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ထပ်မံသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖော်ပြချက် (သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်)ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ဘ်ဆိုဒ် www.i-med.com.au/privacy တွင် ကြည့်ပါ။
ဤသဘောတူညီမှု ပုံစံတွင် လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်ဆေးစစ်ချက်များ နှင့် အစီရင်ခံစာများကို ဆေးကုသရေး အထူးကျွမ်းကျင်သူများ သို့မဟုတ် I-MED နှင့် အသုံးပြုသူ ရယူခွင့်သဘောတူညီမှုတွင် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ဆေးရုံ ဆေးကုသရေး ၀န်ထမ်း တစ်စုံတစ်ရာထံသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ညွှန်းကိုးကားမှု လမ်းညွှန်မှတဆင့် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာအရ ရရှိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို သဘောတူညီသည်။အသုံးပြုသူ ရယူခွင့် သဘောတူညီမှုတွင် လမ်းညွှန်အသုံးပြုသူများမှ ၄င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်ပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော အတတ်ပညာဆိုင်ရာ လှို့ဝှက်ထားရှိမှု၏ လက်တွေ့ကျင့်သုံးသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ဥပဒေများ၊ ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်းများ နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုယ်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာတာဝန် အပြင် ဥပဒေ နှင့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်အချက်များကို လုပ်ဆောင်ရမည့် လိုအပ်ချက်ပါဝင်သည်။ ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ၀န်ထမ်းများသည် လူနာအတွက် စဉ်းစားပြီး ရောဂါအဖြေရှာမှု သို့မဟုတ် ကုသရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်သာ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ ထင်မြင်ယူဆချက်များ မှတ်တမ်းများကို ရယူရန်သဘောတူညီသည်။
မှတ်ချက် - အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများအား သင့်ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်းများကို ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဥပဒေများနှင့်အညီ ရယူစေရန် ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၄င်းတွင် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရမှုကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် လျော့ကျစေရန် လိုအပ်ပါက၊ သို့မဟုတ် သင်သည် ရယူခွင့်ပြုရန် သဘောတူညီမှု ပေးအပ်ခြင်းကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အခါ၊ သို့မဟုတ် ရယူခွင့်ပြုရန် သင့်သဘောတူညီမှုကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မပြောပြနိုင်သည့်အခါ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေများတွင် သင့်ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်းများကို ရရှိထားသည့် မည်သည့် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများမဆို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်ပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော အတတ်ပညာဆိုင်ရာ လှို့ဝှက်ထားရှိမှု၏ လက်တွေ့ကျင့်သုံးသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဥပဒေများ၊ ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်းများ နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုယ်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန် အပြင် ဥပဒေ နှင့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်အချက်များကို ကျင့်သုံးရန်ပါရှိသည်။
မှတ်ချက်- မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၊ လူနာစောင့် သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် လူနာမှ ထိုပုံစံအားနားလည်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် ပေးအပ်ထားသည့်သဘောတူညီမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းမရှိသည့်အခါ ထိုသဘောတူညီမှုပုံစံတွင် လက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်သည်။ လူနာသည် အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် မတတ်စွမ်းနိုင်ခြင်းရှိနိုင်သည်၊ ဥပမာ အသက်အရွယ်အရ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယိုယွင်းခြင်း။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူနာကို ၄င်းတို့အသက်အရွယ်တစ်ခုတည်းကြောင့် မတတ်စွမ်းနိုင်ဟု အလိုအလျောက် မဆုံးဖြတ်ပါ။ ၄င်းတို့သည် အသိပေးထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရွေးချယ်ခွင့်များကို ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သော ရင့်ကျက်မှုရှိနိုင်သည်။
ဤသဘောတူညီမှု ပုံစံတွင် လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်၊ အထက်တွက်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်သည် I-MEDမှ ကျွန်ုပ်၏ ရောဂါအဖြေရှာဆေးစစ်ချက်ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့် အစီရင်ခံစာများကို ဆေးကုသရေး အထူးကျွမ်းကျင်သူများ သို့မဟုတ် I-MED နှင့် အသုံးပြုသူ ရယူခွင့်သဘောတူညီမှုတွင် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ဆေးရုံ ဆေးကုသရေး ၀န်ထမ်း တစ်စုံတစ်ရာထံသို့ ရည်ညွှန်းကိုးကားမှု လမ်းညွှန်မှတဆင့် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာအရ ရရှိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို သဘောတူညီသည်။**
လူနာ၏ နာမည်အပြည့်အစုံ (ကျေးဇူးပြုပြီး စာပုံနှိပ်ပါ) ………………………………………………………………………………..
မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၊ လူနာစောင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ကိုယ်စားလှယ် နာမည် အပြည့်အစုံ(ကျေးဇူးပြုပြီး စာပုံနှိပ်ပါ) နှင့် လက်မှတ်…………………………………….............................................................………………………...........……………
**သင်သည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့်သဘောတူညီမှုကို သင့်ဒေသတွင်းဆေးခန်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လိပ်စာသို့ စာရေးအကြောင်းကြားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံအသိပေးပြီး ထုတ်ယူနိုင်သည်။
Translation education Master's degree - Payap University, Thailand